Ciidamada Nigeria oo dilay 347 ruux oo ahaa shiica – The Voice of Northeastern Kenya
Ciidamada Nigeria oo dilay 347 ruux oo ahaa shiica
Baaritan guud oo la sameeyay ayaa waxa maalinta shalay ahayd ciidamada Nigeria lagu eedeeyay in ay dil u geeysteen 347 ruux kuwaas oo taabacsan shiicada garabkeeda Zakzaky waxana la sheegay in ay ku dileen magaalada waqoyi ee Kaduna dabayaqadi sanadki tagay ee 2015-ka iyago kadibna ku aasay xabal wareed.
Labo maalmood oo rabshada ah ayaa waxa ay magaaladaasi ka bilaabmen 12-ki biisha Desembar kadib marki ay dad shiica ah ay carqaladeeyen kolonyo baabur oo u la socday sarkaal sare ee ka tirsan ciidamada waddanka Nigeria oo jaagadiisa militariga ay ka ahayd Lieutenant General kaas oo lagu magacaabo Tukur Yusuf Buratai.
Maamulka magaalada Kaduna ayaa waxa ay soo xuleen gudiga baaritano ku sameeyo dilalkan la sheegay in ay geeysteen ciidamada waddanka Nigeria waxana ay sheegen in cidi ka dambeysay sharciga lala tiigsan doono.
Warbixin oo ay iyadana horey u soo saartay hay’ada Amnesty International ayaa waxa Militariga Nigeria ay ku eedeysay dil barer ah oo ay u geeysatay dadkaasi shiicada ah ee taabacsan wadaadka weyn ee shiicada ah ee u dhashay waddanka Iran Ibrahim Zakzaky waxana ay warbixintaas sheegtay in ay ugu dambeynti ay dadkaasi ku aasen xabal wareed si ay u qariyaan cadeeymaha ay u heysay fal dembiyeedkaasi.
Militariga Nigeria ayaa waxa ay sheegen in ay ku dhaqaaqen talaabadaasi kadib marki ay dadkaasi la sheegay in ay u socdeen xaflad diimedkaasi ay isku dayeen in ay dil u geeystaan sarkaalka kolonyadaasi la socday ee magaciisa u ahaa Buratai.
← Leroy Sane oo qarka u saaran in u ku biiroo Manchester City
IEBC oo loogu baaqay in ay karka aqonsiga dalka ka dor bidan karka codeynta →